ကယားပြည်နယ်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် မိတ်ဆက်အခမ်းအနားကျင်းပ | Kayah State Hluttaw
ကယားပြည်နယ်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် မိတ်ဆက်အခမ်းအနားကျင်းပ
ကယားပြည်နယ်အစိုးရ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ ပြည်နယ်အမျိုးသမီးကော်မတီ၊ လူမှုဝန်ထမ်း ဦးစီးဌာန၊ UN WOMEN ၊ Norwegian Embassy တို့ပူးပေါင်း၍ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း (NSPAW) (၂၀၁၃-၂၀၂၂) နှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး ရှေ့ပြေးလုပ်ငန်းစီမံချက် အကောင်အထေည်ဖော်ရန် မွန်၊ကရင်နှင့် ကယား ပြည်နယ်တို့တွင် UN Women နှင့် ပြည်နယ်/ဒေသန္တရ အဆင့်တွင် မူဝါဒအစီအစဉ်များကို ပံ့ပိုးကူညီပြီး အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်နိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ ကယားပြည်နယ် ငြိမ်းချမ်းရေး နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံချက် မိတ်ဆက်အခမ်းအနား ကို ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် နံနက် ၉ နာရီခွဲ အချိန် လွိုင်ကော်မြို့၊ နောင်ယား(ခ)ရပ်ကွက်ရှိ မြို့နယ်ခန်းမ၌ကျင်းပရာ ပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှထွေး၊ ဒု-ဥက္ကဋ္ဌ ဦးတင်မြင့်၊ ပြည်နယ်ဥပဒေချုပ်၊ ပြည်နယ်စာရင်းစစ်ချုပ်၊ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး တော်ဝင်နော်ဝေသံရုံး၊ ရန်ကုန် မြန်မာမှ HE. Miss. Tone Tinnes ၊ UN Women မြန်မာမှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Nicolas Burniat ၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ အရပ်ဖက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်အဆင့်ဌာနဆိုင်ရာ များနှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ INGOs, NGOs တို့တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ ကယားပြည်နယ်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးလှထွေး က အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားရာတွင် ယခုစီမံချက်ကို ရေးဆွဲရာမှာ ၂၀၁၇ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး မွန်၊ကရင်၊ ကယား ပြည်နယ် (၃)ခုမှာ ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ကြောင်း။ ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်မှုရဲ့ အဓိကရလဒ်အဖြစ် အမျိုးသမီးတွေ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ လုံခြုံရေးနဲ့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်း စီမံချက်တွေ ရေးဆွဲဖော်ဆောင်ခြင်းကြောင့် ဒေသအဆင့်မှာ အမျိုးသမီးတွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် မဟာဗျူဟာစီမံကိန်း( NSPAW ) အကောင်အထည်ဖော်မှုကို အရှိန်မြှင့်တင် ရာ ရောက်မှာဖြစ်ကြောင်း။ အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကယားပြည်နယ် အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံချက်မိတ်ဆက်အသိပေးခြင်းဟာ ပြည်နယ်အတွက် တကယ်ကိုအနှစ်သာရရှိတဲ့ မိတ်ဆက်အသိပေးပွဲ တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဆက်လက်၍ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ နော်ဝေသံအမတ်ကြီး တော်ဝင်နော်ဝေသံရုံး၊ ရန်ကုန် မြန်မာမှ HE. Miss. Tone Tinnes က အမှာစကားပြောကြားပြီး UN Women မြန်မာမှ ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr. Nicolas Burniat ကအမှာစကားဆက်လက်ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် UN Women မှ အမျိုးသားအဆင့်စီမံကိန်းညှိနှိုင်းရေးမှူး ဒေါ်စန္ဒာဝင်း က အမျိုးသမီးများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကယားပြည်နယ်အမျိုးသမီးများ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းစီမံကိန်းအကြောင်းအား ရှင်းလင်းပြောကြားကာ တက်ရောက်လာသူများက ပူးပေါင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။ ယင်းနောက် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနမှ ပြည်နယ်မှူး ဦးချန်ပဲ့ က ကျေးဇူးတင်စကားပြန်လည်ပြောကြားခဲ့ပြီး စုပေါင်းအမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးခဲ့သည်။
Older Postကယားပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ ဉီးလှထွေးအား UN Women မှ မြန်မာပြည်ဌာနေကိုယ်စားလှယ် Mr.Nicolas Burniatနှင့်အဖွဲ့ လာရောက်တွေ့ဆုံ